Ike dị n'aha Jizọs Pụrụ Ịme Ihe Ọ bụla
Previous Article Buhari, Nnukwu Onyeisi Ụkọchukwu nke Canterbury Hụrụ
Next Article Bishọọpụ Nwokolo Agbapee Ụlọ Ụka Ọhụụ n'Ọnịtsha
Dịka ndị ụka Anglikan na Dayọsis nke Aguata na Anambra Steeti chịkọtara mmemme ọgbakọ nzukọ nke ụlọ ụka niile dị na dayọsis ahụ sonyere n'ime ya, agwala ndị otu Kraịst na ike dị n'aha Jizọs, dịka ọ dị n'isi okwu ọgbakọ ahụ pụrụ ime ihe ọ bụla.
Ya bụ ọgbakọ nke onye nnukwu ụkọchukwu, Samuel Ezeofor, nọ n'isi ya, bụ nke were ọnọdụ na Ụlọụka Jemes dị Nsọ dị na Uga, n'okpuru ọchịchị Aguata, Steeti Anambra, site n'abalị iteghete nke ọnwa Mee were ruo n'abalị iri na abụọ nke ọnwa Mee.
N'ozi ya ka onye nnukwu ahụ gụpụtara ọtụtụ ọrụ nke dayọsis rụrụ ma nke ha ji n'aka, ihe iche aka mgba dị iche iche ha na-enwe bụ nke atụrụ arọ dị iche iche iji were hụ ụzọ a ga-eji dozie ya. Ọ rịọziri ndị otu Kraịst ka ha jisi ike n'ekpere na ị kwenye n'ike nke dị n'aha Jizọs pụrụ ịgbanwe ala anyị na steeti anyị n'agbanyeghị nrụrụaka na mago mago juru na ntụliaka gara aga.
Ọ gara n'ihu kwuo na Onyeisiala na gọvanọ Anambra Steeti kwesịrị ịrịọ ụmụafọ mgbaghara maka ịgbarịpụ ha na ịgbapụta ha azụ site n'ụdị agwa ha kpara tupu na oge a na-eme ntụliaka a.
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ pụtara ìhè n'ọgbakọ a gụnyere ekpere, ịmụ akwụkwọ nsọ, abụ olu ọma dị iche iche, ịkele Chineke, ịchụnta ego maka ọganihu dayọsis, ihe ngosi nke ndị otu Brigade ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị.